पाइलट भन्छन्, ‘बोइङले हाम्रो विश्वास गुमायो’ | Ratopati
पाइलट भन्छन्, ‘बोइङले हाम्रो विश्वास गुमायो’
personएजेन्सीaccess_timeMar 26, 2019 chat_bubble_outline0
मेरा समकक्षी पाइलटमा विमानप्रतिको विश्वास क्षय भइरहेको छ । किनभने दुवै दुर्घटनामा कारक देखिएको फ्लाइट कन्ट्रोल सफ्टवेयर एमसीएएस (मनुभरिङ क्यारेक्टरिस्टिक अगुमन्टेसन सिस्टम) बारे बोइङले पाइलटहरुलाई विस्तृत जानकारी नै दिएको थिएन । अब के पाइलटहरुले बोइङका अन्य उत्पादनहरुमाथि विश्वास गर्न सक्छन् ? उनीहरुको प्रश्न हुनेछ – बोइङले अझै मसँग के लुकाइरहेको छ ? पाइलटहरु सँधै शंकालु हुन्छन्, यो बानीले हामीहरुको निर्णय क्षमतालाई परिभाषित गर्छ । यो राम्रो कुरा पनि हो, विशेष गरेर कुनै आपत्तकालिन स्थितिमा ।
यदी म ७३७ म्याक्सको पाइलट भएको भए म दुई दुर्घटनाको कारक बनेको समस्या समाधान भएको प्रमाण माग्ने थिए, जुन विषयमा अझै पनि अनुसन्धाननै भइरहेको छ । कस्तो प्रमाण ? पहिलो एमसीएएस सिस्टमबारे स्पष्ट व्याख्या र कुनै समस्या देखिए त्यसको समाधानको उपाय र दोस्रो आपत्तकालिन स्थितिमा त्यसको सुरक्षित प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविक फ्लाइट टेस्ट वा स्टिमुलेटरबाट भएपनि कागजी दस्तावेज । यदी दुर्घटनाका अन्य थप कारणहरु पनि छन् भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
मेरा समकक्षी पाइलटहरुले म्याक्सकै स्टिमुलेटरमा नै प्रशिक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । एउटा आइप्याडमा गरेको प्रशिक्षणले धेरैको चित्त नबुझ्न सक्छ । आफूले जानेको विमानको मोडलको नयाँ भर्सन भए नयाँ विमान प्रयोग गर्न पाइलटहरुले प्रशिक्षण म्यानुअल मात्र हेरे भने पनि त्यो अनौठो होइन । (म्याक्स सन् १९६० मा बनेको ७३७ मोडलको नयाँ भर्सन मात्र हो) । त्यस्तै, एफएएले म्याक्स विमान उडान पाइलटहरुको लाइसन्समा विशेष पाइलट रेटिङ आवश्यक नरहेको कारण धेरै एयरलाइन्सहरुले नयाँ स्टिमुलेटर ल्याउन चाहेका छैनन् ।
के पाइलटले पुनः बोइङमाथि विश्वास गर्लान् विशेष गरेर ७३७ म्याक्स माथि ? सायद कुनै दिन । तर, अहिलेको लागि मेरा सकमक्षीहरुले आफू र आफ्नो यात्रुका लागि विमान सुरक्षित रहेको महसुस नगरेसम्म त्यसको ककपिटमा बस्नेछैनन् ।
(लेस एबेन्डले ३४ वर्ष अमेरिकन एयरलाइन्समा बोइङ ७७७ को क्याप्टेनको रुपमा काम गरेर हालैमात्र अवकास लिएका हुन् ।)